विचार Archives - All Nepal
केपी ओलीलाई कडा ब्याङ्गे गरे डा. बाबुरामले अरुका छोराछोरीलाई भर्ना गरेर फोटो खिच्नु भन्दा आफ्नै नाती नातिनालाई सरकारी स्कुलमा पढाएर देखाउ …
काठमाडौँ, । प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मले कम्तीमा पनि एक जना बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मेवारी लिँदै विद्यालय भर्ना गरिरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले कडा टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत टिप्पणी गर्दै डा. भट्टराईले अरुको बालबालिकाको सट्टा आफ्नै छोराछोरी र नातिनातिनीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न सुझाव दिएका हुन् । अरुको बालबालिकालाई सरकारी स्कूलमा […]
खुल्ला आकाशमा उढ्ने चाहना थियो । उम्रिन लागेको पखेटालाई फेदै लगाएर काटिदिए अनि श्रीमानको घर नाम गरेको पिंजडामा कैद भएँ । मलाई त्यो घर खै किन वेश्यालय जस्तो लाग्यो अनि म वेश्या जस्तै । जहाँ मेरो भावनाको कुनै कदर थिएन । मेरो श्रीमान नाम गरेको ग्राहक दिनभरी बाहिर जान्थ्यो रातमा मेरो शरीर भोग गर्थ्याे । […]
निजी स्कुलका बिधार्थी को बेथा कस्ले सुनीदेलाः ब्यावहारिक ज्ञानका कुरा सिकाउदै नसिकाई पिजडाभित्रको खाल्डोमा धकेल्दै
महेश खनाल नयाँ वर्ष लागेसँगै विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम पनि धमाधम भइरहेको छ । लाखौँ स-साना विधार्थीलाई उनीहरुको उज्ज्वल भविष्यको लागि उनीहरुको बुवाआमाले विद्यालयमा भर्ना गरिरहेका छन् । ठूलो झोला सँगसँगै ठूलो सपना बोकेर स–साना विद्यार्थीहरु विद्यालयतिर लम्किरहेका छन्। जब एउटा विद्यार्थी बोर्डिङ स्कुलमा छिर्छ, त्यतिबेला किताब र कापीको जति भारी हुन्छ त्यति भारी पढाईको पनि […]
गोपाल किराँतीले भने, केपीओलीले ५ बर्षमा समृद्ध होईन अझै कंगाल चाही बनाउछन !
संविधान मान्ने नेपाली हुनुको नाताले पाँच बर्ष जस्तोसुकै भएपनी यो सरकारलाई मान्नुपर्छ।यो पाँच बर्ष नेपाली जनताले पनि सरकारले केहिगर्छ भन्ने आशामा प्रतिक्षा गर्नेछन्।तर पाँच बर्षपछि भने केहिपनी हुँदैन। माओवादी पुनर्गठन अभियानमा लागेका गोपाल किराँतीले माउण्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम खरो प्रश्नमा कुराकानी गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्। एमाले भित्र एउटा गुटमा इमान्दार,क्रान्तिकारी र प्रगतिशिल मानिसहरु पनि छन् […]